Ama-eagles nezinye izinyoni ezidla inyamazane bavame ukusola ngokusobala ngokubulala imfuyo encane, ngoba bazoqhubeka bedla ngesilwane esifile, ngokungafani ne-caracal noma i-jackal ezofihla ngokushesha lapho bezwa abantu beza. Nokho, ama-eagles ahlambalaza, ngakho-ke avame ukondla izilwane ezifile. Phakathi nenkathi yemvubelo, bangase balinde ngisho ne-ewe ukuqedela i-lambing ukuze inqabe ukubeletha.
I-Verreaux (i-Aquila verreauxii) noma izintshontshisi ezimnyama zivame ukutholakala emigqumeni yezintaba kanye nama-rocky outcrops e-Afrika. Lezi zinyoni ezimnyama zinezinyawo eziphuzi, i-bill enezinyosi ezibukhali kanye ne-V emhlophe nasemhlane. Izinyoni ezindala zingama-78 cm kuya ku-90 cm ubude, zinamaphiko we-181 kuya ku-219 cm. Bakha izidleke zabo emagqumeni emifula noma emagcekeni ngamabhangqa amabili besebenzisa isidleke esifanayo iminyaka eminingi.
Amaqhawe ompi (i-Polemaetus bellicosus) yizinhlobo ezinkulu ze-ukhozi e-Afrika, ikakhulukazi ezitholakala ezweni elivulekile kanye nasezindaweni zasendle. Izidleke zazo ziqukethe izakhiwo ezinkulu zenduku ezakhiwe ngaphansi kwezingqimba zemithi ende.
Izinyoni ezindala zinamaqabunga ama-brown kanye nesikhumba esifushane somnyama. Amaphezu amhlophe anombala omnyama anamabala amnyama adlula emilenzeni enezinyosi. Umthethosivivinywa unamathele kakhulu futhi unomnyama, kuyilapho izinzwani ziwuhlaza okwesibhakabhaka ngamathalenta amakhulu. Izinyoni ezindala ziphakathi kuka-78 kuya ku-96 cm ubude obunezinhlangothi eziphakathi kuka-188 kuya ku-260 cm.
I-rock dassies (i-hyrax) ihlanganisa cishe amaphesenti angama-90 okudla kwe-Verreaux, ngenkathi izinyoni ze-hares, i-rock dassies, i-leguaan ne-game zihlanganisa ukuhlinzekwa okuyinhloko ekudleni kokulwa kwokhozi.
Indlela Yokubulala Nokuzondla
I-Martial ne-Verreaux ama-eagles ayifuni neze ukubeka isisindo esitokisini esincane. Uma kwenzeka ukulimala, ngokuvamile kubangelwa abantu abanobudlova abangenalo ulwazi lokuzingela futhi abafuna ukudla.
Esikhathini esingavamile uma kwenzeka ukulahlekelwa kwemfuyo, izilwane ezihlosiwe ziyoba ezincane futhi zingabi nesisindo esingaphezu kuka-5 kg. Ukuphanga ngokuvamile kuvame ukuba inkukhu noma amawundlu kanye nezingane ezineminyaka embalwa kuphela ubudala. Abalimi abanenkomo abanesibindi sokwesaba kusuka eagles kusukela inkonyane esanda kuzalwa inkulu kakhulu ngisho nokhozi olukhulu kunabo bonke.
Ama-eagles abulala ngamatalenta awo, ngesiteleka ekhanda noma ngaphezulu ngokuvamile ukubopha entanyeni noma ngaphezulu kwezilwane. I-punctures engavamile ekhanda noma ekhanda, ehambelana nokuqothulwa okukhulu ngaphansi kwesikhumba, kungakho-ke izibonakaliso ukuthi ukhozi kungenzeka ukuthi wayebhekene nokubulawa.
Khumbula ukuthi izimpawu zokudla akuyona inkomba yokuthi isilwane sibulewe yinyoni yezilwane. Lapho ukondla, izintshontshe zizokhipha ubuningi obuningi noma uboya. Bavame ukudla kusukela ngemuva kwezingalo zangaphambili, besebenza ngendlela eya ngasekhanda. Bayawudla amaphaphu, inhliziyo kanye nezinye izitho futhi ngezinye izikhathi badonsa amathumbu ngesikhumba abasenzile. Ngezinyosi zazo, zizoxosha kahle inyama phakathi kwamathambo, zishiye isidumbu sihlanzeke kahle. Abalokothi balahle udonga lwesisu.
Izinyoni nezinyoni zezilwane kuyizinhlobo ezivikelwe, ngakho-ke angeke zibulawe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Uma kungabonakaliswa ukuthi ukhozi lubophezele ekubulaweni kwesitoko, abalimi kufanele baxhumane nomthetho oseduze wokulondolozwa kwemvelo noma isazi esizosiza ukuhambisa umuntu onamandla.
Zombili izikhali ze-warre ne-Verreaux zithatha amasimu amakhulu, ngakho ukutholakala kwabo kuzosiza ukugcina izinkozi ezinamandla nezinyoni ezidla inyama. Ngakho-ke, kunengqondo ukukhathalela umbhangqwana wakho wokuhlala.
Izindlela zokulima zomsindo kufanele zisetshenziselwe ukuqinisekisa ukuthi izintshontshe azilingi ukuguqulwa ezilwaneni zabo zemfuyo. Abalimi bangakwenza lokhu ngokuba nenani elincane lezinkathi ezinyakazayo ngonyaka ukuze bavumele ukunakekelwa okungcono nokulula kwamawundlu. Izinkomo zezimvu akufanele zibe khona eduze nendawo yezidleke, kodwa kunalokho eduze komuzi noma indawo yomsebenzi womuntu. Umalusi angasiza futhi ukuvikela izilwane ezincane uma kudingeka zidle ezindaweni ezikude. Amawesifazane ashiya amawundlu kufanele ahlanganiswe.
Izinkukhu kufanele zigcinwe ezigodini.